XOG: Axmed Madoobe & Siciid Deni oo Awoodooda lagu kala fur furayo Muqdisho - Allbanaadir Media
Home Xogta Dahsoon XOG: Axmed Madoobe & Siciid Deni oo Awoodooda lagu kala fur furayo...
XOG: Axmed Madoobe & Siciid Deni oo Awoodooda lagu kala fur furayo Muqdisho
Iyadoo maanta uu Muqdisho ka furmay shirka udhaxeeya madaxda golaha wadatashiga qaran ayaa hadana waxaa ku geedaaman shirkaasi kala jiidasho xubnaha saameynta leh.
Soo dhaweyntii Siciid Deni maanta iyo tii shalay Axmed Madoobe loo sameeyey ayaa kaaf iyo kala dheeri aheyd,miisaan ahaan dadka soo dhaweeyey iyo qaabka loo saadaaliyey.
Deni oo lagu xamanayey inuu doonayey murashax Madaxweynaha Soomaaliya inuu noqdo ayaa hadana maanta la tusay in laga xun yahay tallaabada dhabar jebin uu damacsan yahay.
Warar ayaa xitaa sheegaya in midowga Murashaxiinta ay Axmed Madoobe u arkeen siyaasi aragti fog sidaa awgeedna Deni iyagoo ku xumeenaya ayey shalay maqaam fiican ugu direen soo dhaweyntiisa xubno saameyn ku leh xisbiyadooda.
Kala dilka siyaasadeed ee wiil iyo Abtigiis lala damacsan yahay ayaan la ogeyn sida ay ku suurta geli karto,inkastoo Madoobe uu qadarin iyo qiimeyn abtinimo u hayo Reer Puntland mana usahlana inuu la dagaalo.
Sheekh Shariif,Xasan Sheekh & Xubno ka mid ah Mucaaradka Madaxweynaha raadinaya ayaa umuuqda mid ay ujaakirayaan Siciid Deni,taas oo laga cabsi qabo in deni iyo Farmaajo ay saaxiibo siyaasadeed noqdaan.
Cadowgaaga Cadowgiisa caano mac ayaa la siistaa!!
Siyaasada ayaa ah saaxiibkaaga maanta waxa uu kuu noqon karaa seefta berri ku qaadi doonta waana mida loo yiri siyaasadu dan joogto ah ayey leedahay maahane saaxiib joogto maleh.
Xubno ka ag dhaw Siciid Deni ayaa waxay xaqiijiyeen in madaxweynaha Puntland uu qudhiisa fahansan yahay jarta siyaasadeed ee lagula dheelayo Muqdisho uu maanta soo gaaray.